बिरालो। के कसरी लामो र पशु जीवन निर्धारण गर्छ?
धेरै मानिसहरू pet र मेरा सबै हृदयले उहाँलाई बलियो लिङ्कमा लिन जन्म दिन। - बिन्दु छैन एक सुगा, एक सजावटी खरायो, एक बिरालो वा कुकुर, राम्रो, वा अरू कसैलाई: र आफ्नो घर मा बाँचे pupils को जो यति महत्त्वपूर्ण छैन। मुख्य कुरा आफ्नो पाल्तु जनावर हो - सबै भन्दा, बुद्धिमान चतुर र अद्वितीय।
साँच्चै, प्रजनकों वा "kotolyubov" सुनेर छक्क विविध वर्ण, बानी र आफ्नो जनावरहरूको प्यारा हरकतों कसरी। र कसरी मानिसहरूको आँखा माथि, प्रकाश आफ्नो पाल्तु जनावर बारेमा हास्यास्पद कथाहरू बताउन! पशु प्रेम केहि छ। बिरालोहरु र कुकुर - तिनीहरूले मनोरम सुन्दर पुरुष र सुन्दर महिला आउँछ विशेष गरी जब कष्टप्रद गल्तीलाई विदाई भन्छन्। तिनीहरूले यसबाहेक, सिक्न धेरै छ, छ! आफ्नो मनपर्ने बिरालो, धेरै राम्रो बनाउँछ भनेर सबै। उहाँले, खाने गर्दा सोता, खेल वा बस खिडकी बसिरहेका, चराहरूले हेर्दै तिनीहरू सबै समय आनन्द उठाउन सक्छौं। मर्यादा, आत्म-sufficiency, अनुग्रह ...
तर तपाईं भन्दा आफ्नो परिवार मा महत्त्वपूर्ण छ जो प्रश्न, बारेमा विचार? त्यो सहि, बिरालो! यसलाई छ वा आज किनेको भइरहेको छैन किन पनि बच्चा व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, र उहाँले बुझ्न र प्रतीक्षा, तर मात्र एक पाल्तु जनावर प्रतीक्षा गर्न सक्दैन। को भनाइ जान्छ, हामीले tamed गर्नेहरूका लागि जिम्मेवार छन्। जनावर तपाईं पहिलो स्थानमा आवश्यक सबै प्राप्त गर्नुपर्छ किन हो।
जीवन span पशुहरू आनुवंशिक उत्तराधिकार मा निर्भर गर्दछ, तर जीवनको गुणस्तर मा एकदम पनि खाना र हेरविचार असर।
एक पाकेको बुढेसकालमा गर्न बाँच्न राम्रो मौका एक सीमित ठाउँ बस्ने एक बिरालो छ कि यो विश्वास छ, तर विशेष अवस्थामा तिनीहरूलाई लागि सिर्जना हुनुपर्छ:
खुला हावा निःशुल्क पहुँच;
जगिङ र व्यायाम लागि पर्याप्त ठाउँ;
र, को पाठ्यक्रम, अनन्त प्रेम। जनावरहरूको जीवन span, सम्भवतः यो महत्वपूर्ण कारक मा निर्भर गर्दछ। मनपर्ने, खुसीको कुरा कहिल्यै पछि यसको आफ्नै मा पशु caressed। र किन यसलाई प्रेम गर्न छैन भने, पाल्तु जनावर घर सुरु? धेरै मालिकहरूले आफ्नो पाल्तु जनावर कुरा र बस तिनीहरूले बुझ्न निश्चित गर्नुहोस्।
पशु चिकित्सा को सफल विकास - औसत जीवित उमेर मा वृद्धि को लागि कारण एक घरेलू बिरालोहरु को। होसियार हेरविचार संयोजनमा सामयिक खोप, पौष्टिक राम्रो खाना बिरालो कम्तिमा 15 वर्ष बाँच्न गर्न अनुमति दिन्छ। तर यो सीमा छैन। जनावरहरूको जीवन span, यो मामला मा - बिरालोहरु, बीस वा बढी वर्ष सम्म लिएर। को बिरालोहरु 34 वर्ष बस्ने मामला।
व्युत्पत्ति, बोट प्रजनन प्राप्त बिरालोहरु, सुविधा बारी मा, पाल्तु जनावर को जीवन को लम्बाइ असर गर्छ। तिनीहरूलाई केही निश्चित रोगहरु गर्न predisposed छन्, उदाहरणका लागि, Persians मृगौला पत्थर र, यो थाह झुकाउ हो, हामी रोग को उद्भव प्रकुपित छैन प्रयास गर्नुपर्छ। किट्टी नियमित गर्ने मा सल्लाह प्रदान गर्नेछ डाक्टर, देखाउन छन् जनावर, हेरचाह बारी मा सकारात्मक आफ्नो पाल्तु जनावर को स्वास्थ्य असर गर्नेछ जो।
जनावरहरूको जीवनको अवधि नकारात्मक overfeeding असर गर्छ। छाप प्रभावशाली वजन र आकार प्राप्त गर्दा धेरै मनपर्छ। तर तपाईंले पशु फीड अघि, जस्तै सखाप हुने कि भनेर सोच्न अतिरिक्त वजन? यस्तो हृदय र कलेजो रोग, गठिया, मधुमेह, रूपमा एक यस्तो appendage, संग सास को shortness? यसलाई जो, बाहेक अरू सबै कुरा गर्न, एक स्वस्थ, सक्रिय, स्मार्ट बिरालो हेर्न धेरै nicer र overfed छैन, र एक आहार धारण गरेको छ, तर यो एक परेशानी, र पशु तनावपूर्ण अवस्था छ। यो पछुताउनु गर्न छैन जारी गर्न नियम लीन र overfeed छैन, राम्रो छ।
बिरालोहरु को औसत जीवन, नस्ल आधारमा
बिरालो लगभग लाग्न सक्छ को एक विशेष नस्ल को जीवन span:
Siamese - 20 वर्ष;
बर्मेली - 15 वर्ष;
मानद्वीप - 20 वर्ष;
Maine Coons - 14-16 वर्ष।
उचित हेरविचार, पोषण र जनावरहरूको राम्रो स्वास्थ्य संग ब्रिटिश बिरालोहरु को जीवन प्रत्याशा पनि देखि 15 20 वर्ष हुन सक्छ। अन्यथा, सडक वातावरण बस्ने यो भव्य पशु, जीवन को मात्र 4-5 वर्ष विनियोजन; यो बिरालोहरु विभिन्न अवस्थामा बाँच्ने मानेर छ। तपाईंको furry (वा) मनपर्ने प्रेम संग हेरचाह र तिनीहरूले तपाईंलाई एकाकीपनको देखि सकारात्मक भावना धेरै र उद्धार दिनेछु।
बिरालोको बच्चाहरुको खोप: तथ्यहरू
किन valerian जस्तै बिरालोहरु के र किन तिनीहरूले पनि valerian गंध सक्दैन
ड्याक्शन्ड बौना। कुकुर नस्ल ड्याक्शन्ड। कर: वर्ण, फोटो
बिरालोहरु मा एलर्जी। सामान्य जानकारी
एक सिंहावलोकन, अनुप्रयोग निर्देशन र सिफारिसहरू: आफ्नो हातमा painting बिना निशाना हटाउने लागि उपकरण
कसरी विन्डोज 10 मा प्रयोगकर्ता पासवर्ड अनुरोध असक्षम पार्नु हुन्छ?
यूरिक एसिड - एक पदार्थ सामान्य जीवन संग interfering
Karnegi Deyl: जीवनी, सुझाव र उद्धरण मनोवैज्ञानिक
पर्खाल मा च्याउ: सबै ल्याउन कसरी